Password တွေ Secure ဖြစ်ဖို့ (Cracking ဆိုတာ) - အောင်အောင်ဆွေ Blog
Password တွေ Secure ဖြစ်ဖို့ (Cracking ဆိုတာ)
ဒီခေါင်းစဉ်ကို တွေ့ လို့ Cracking နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုအောက်မှာရှာတွေ့ မယ်လို့ တော့မထင်ပါနဲ့... :P ဗဟုသုတအနေနဲ့ Cracking ဆိုတာဘာမှန်းမသိတဲ့ User တွေကို Knowledge Share ပေးတဲ့သဘောပါ ...
Cracking ဆိုတာ ..
၁ ။Programming Language ကို နားလည်ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ သူတွေလုပ်တဲ့ အပြုအမူတွေပါ ... ဥပမာပြောရရင် .. မြန်မာ phone website တစ်ခုက ကတစ်ခြား မြန်မာ Developer တွေရေးထားတဲ့ Android Application တွေကို Cracked လုပ်သွားပါတယ်တဲ့ ။ အဲဒီ့ဖြစ်စဉ်က တစ်ခြား Developer တွေရေးထားတဲ့ Application တွေမှာရှိတဲ့ Serial Number တောင်းတဲ့ Code တွေ ။ Activate တောင်းတဲ့ code တွေ ။ ၀ယ်ပါယူပါ ဆိုတာတွေပေါ်လာအောင် ရေးထားတဲ့ Code တွေကို သူက Debugging Software တွေသုံးပြီးတော့ အဲဒီ့ Activate တွေ serial တွေ မတောင်းအောင် ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး ပြန် package ထုတ်လိုက်တာပါ ။ ဒါက သူနားလည်နေတဲ့ Programming Language အရ ရှာဖွေပြုပြင်လိုက်တဲ့ application Cracking ဆိုတဲ့နည်းတစ်မျိုးပါ ...
၂။ Password Cracking ....
Password cracking ဆိုတာကတော့ အပေါ်ကလို Code တွေကို မိမိကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ရှာဖွေပြုပြင်သလို မဟုတ် တော့ပါဘူး... သူက မှန်းရတဲ့ program တစ်ခုကို cracker ကသုံးပြီးရှာဖွေရတာပါ .. ဥပမာပြောရရင် rar password တွေကို ရှာတဲ့ software တွေပါပဲ .. သူ့ ရဲ့ ရှာဖွေတဲ့ နည်းလမ်း (algorithm) ကတော့ စာလုံးတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးလျှောက်ထည့်ပြီးစစ်တာပါ ... ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ သင်က password တစ်ခုကို "a" လို့ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ .. ဒါဆိုရင် Cracking software က သူ့ ရဲ့ Algorithm အရ စာလုံးတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးလျှောက်ထည့်ရင်း (ဥပမာ ..0လို့ သူကစရှာမှာပါ . သင်ကပေးထားတာ0မဟုတ်တော့ မမှန်ရင် ပွင့်သွားမှာမဟုတ်တော့သူက .. နောက်ထပ် 1 ဆိုပြီးသူက ဆက်ထည့်ပြီးဝင်ကြည့်မှာပါ .. နောက်မမှန်ရင်2/3 / 4/5ဆိုပြီး ထပ်ထပ်ထည့်ပြီး ဆက်တိုက်ရအောင်ကြိုးစားဖွင့်နေမှာပါ .. နောက်တော့0to9ပြည့်သွားလို့ မပွင့်လာတဲ့အတွက် Number တွေကုန်ပြီဆိုပြီး Alphabet တွေကိုစရှာရင်တော့ "a" ဆိုတာကို စထည့်လိုက်ပြီး သင်ထည့်ထားတဲ့ password ကိုသူကလည်းမှန်အောင်ထည့်သွားနိုင်တဲ့အတွက် password ကိုအောင်မြင်စွာ အဲဒီ့ program က Crack လုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ ... ကျွန်တော်ပြောတာ သဘောပေါက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. သူ့ ရဲ့ သဘောတရားက
၁။ နံပါတ်တွေကို ၁ လုံးစီအရင်ထည့်ရှာပါတယ် (0123.. )
၂။ Lower Case တွေကိုရှာပါတယ် ( abcd .. )
၃။ Uppercase တွေကိုရှာပါတယ် (ABCD ..)
၅။ Special Character တွေကိုရှာပါတယ် (!@#$% .. )
Cracking လုပ်တဲ့ Algorithm တွေက အများကြီးဆိုတော့ ဘယ်ဟာတွေကို ဘယ်လိုအရင်စစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ပြောဖို့ မလွယ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေတာတစ်ခုကတော့ သင်ဟာ password တစ်လုံးတည်းသာပေးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Cracker က ကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သင့် password တန်းပေါ်လာမှာပါ .. :P ...
အဲဒီလို မဖြစ်အောင်လို့Password Strength ဆိုတာတွေကို သင် Sign Up လုပ်တိုင်းမြင်နေရမှာပါ .. တစ်ချို့ password တွေဆို (wireless Password) အနည်းဆုံး Password 8 လုံးပေးရပါတယ် ... ဘာလို့ ပေးရလဲ သင်သိသွားပြီမဟုတ်လား ... Cracking Software ဆိုတာ password များလေ စစ်ရတာ အချိန်ကြာလေပါ ပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ နံပါတ်လေးလုံးနဲ့ lock လုပ်လုပ်လို့ ရတဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်တွေကို ဂဏန်း 999 လုံး အချိန်ပေးပြီး နှိပ်ရင် ပွင့်လာတတ်တဲ့သဘောတရားပါပဲ ...
အဲ ဒါပေမယ့်သင်က password ကို number ချည်းပဲပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အလုံးရေများလည်း အလွယ်တကူ ရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ရှာဖွေတွေ့ သွားနိုင်သလို .. lowercase ချည်း uppercase ချည်း .. special character ချည်းတွေပဲပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမှန်းတတ်တဲ့ Cracker ကအလွယ်တကူရယူသွားမှာပါပဲ ...
သူက တစ်ခုချင်းစီပဲစစ်ခိုင်းသွားမှာမို့ လို့ ပါ .....
အပြည့်စုံဆုံး Complex Password ဆိုတာကတော့ အပေါ်က ၅မျိုးလုံးပေါင်းစပ်ထားပြီး .. အနည်းဆုံး ရှစ်လုံးထက်မနည်းရှိတဲ့ password မျိုးပါ ..
အဲလို password မျိုးပေးထားတဲ့ အရာတစ်ခုကို Crack လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Cracker ဟာ လနဲ့ ချီပြီးအချိန်ယူ ရပါတယ် ... ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေတာတစ်ခုကတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင့် password ကို ရသွားမယ်ဆိုတာပါပဲ .. :P ..
..... နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ ကြားနေကျ စကားတစ်ခုရှိသေးတယ် .. password တွေကို ၄၂ ရက်ကြာရင် တစ်ခါ ပြောင်းသင့်တယ်တဲ့ ... ကဲဘာလို့ ပြောင်းသင့်တယ်လို့ ပြောတာလဲ သဘောပေါက်ပြီလား ... မသိရင်လည်း မရှက်ပါနဲ့:P ... (Standard Complex password တစ်ခုကို Crack ဖို့ ၄၂(အတိအကျတော့မသိ) လောက်ကြာပါတယ် သဘောတရားက Password Crack လုပ်နေတဲ့software ကို အာရုံနောက်လိုက်တာပါ ... software က အရင်နေ့ တွေက မမှန်ဘူးလို့ ကျော်သွားတဲ့ password ကို ပြန်ပေးလိုက်မိရင်တော့ အဲဒီ့ Software ကတစ်သက်လုံးရှာမတွေ့ နိုင်တော့ပါဘူး .. ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ သူစစ်မဲ့ password ကိုမှပြောင်းလိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ :P ) ...
ဘာပဲပြောပြော အထိတ်တလန့် ကြီးဖြစ်စရာတော့မလိုပါဘူး .. ဘာလို့ လဲဆိုတော့ facebook တို့ Gtalk တို့ ကို အဲဒီလို Crack လို့ မရလို့ ပါပဲ .. သင်လည်း facebook password ကိုမှားရိုက်ဖူးမှာပါ .. Verify you are not robot ဆိုတာကိုတွေ့ ရမှာပါ ။ စာလုံးလေးတွေကို မပီမပြင်လေးတွေပြထားပြီး ပြူးပြဲရှာအတင်းရိုက်ခိုင်းပါတယ် .. အဲလို လုပ်ထားတဲ့အတွက် cracking application တွေ အခွင့်မသာတော့ပါဘူး .... Gtalk ကတော့ ခဏခဏမှားရိုက်ဝင်တာမျိုးရှိရင် account ကို ခဏ lock လိုက်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် အဲလို Service တွေမရှိတဲ့ ... နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ Password ကိုသတိထားပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါတယ် ......